Idi China FK816 Akpaaka Ugboro abụọ Isi Nkuku Akara Labeling Labeling Machine factory and suppliers |Fineco
Igwe nkpọ aha n'akụkụ ngwaahịa
FK816 Akpaaka okpukpu abụọ isi nkuku akara akara akara igwe
① FK816 dabara maka ụdị nkọwapụta na igbe udidi dị ka igbe ekwentị, igbe ịchọ mma, igbe nri nwekwara ike ịkpọ ngwaahịa ụgbọ elu.
② FK816 nwere ike nweta ihe nkiri mkpuchi nkuku okpukpu abụọ ma ọ bụ akara akara, nke a na-ejikarị na ịchọ mma, eletrọnịkị, nri na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa.
③ FK816 nwere ọrụ ndị ọzọ na-abawanye:
1. Mbipụta koodu nhazi ma ọ bụ ngwa nbipute ink-jet, mgbe ị na-ede aha, bipụta nọmba batch mmepụta doro anya, ụbọchị mmepụta, ụbọchị dị irè na ozi ndị ọzọ, ntinye na ntinye aha ga-eme n'otu oge.
2. Ọrụ nri na-akpaghị aka (jikọta ya na nleba anya ngwaahịa);
FK816 dabara maka ụdị nkọwapụta na igbe ederede dị ka igbe ekwentị, igbe ịchọ mma, igbe nri nwekwara ike ịkpọ ngwaahịa ụgbọ elu, zoo aka na nkọwa FK811.
FK816 nwere ike nweta akara ngosi ihe nkiri okpukpu abụọ, akara mkpuchi zuru oke, akara akụkụ ziri ezi, akara ngosi multi-labelụ kwụ ọtọ na akara akara multi-label, nke a na-ejikarị na ịchọ mma, eletrọnịkị, nri na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa.
FK816 nwere ọrụ ndị ọzọ iji mụbaa:
Ihe nbipute koodu nhazi ma ọ bụ ngwa nbipute ink-jet, mgbe ị na-ede aha, bipụta nọmba mmepụta doro anya, ụbọchị mmepụta, ụbọchị dị irè na ozi ndị ọzọ, a ga-eme koodu na ntinye aha n'otu oge.
nhazi ngwa nbipute, gbanwee ọdịnaya ngwa nbipute n'oge ọ bụla, ghọta ọrụ nke ibipụta na labeling n'otu oge.
Ọrụ nri na-akpaghị aka (jikọta ya na nleba anya ngwaahịa);
Ọrụ nchịkọta ihe na-akpaghị aka (ejikọta ya na nleba anya ngwaahịa);
Mụbaa ngwaọrụ ịde aha;
Oghere ala FK816 gbasara 2.35stere.
Nhazi nkwado igwe.
Igwe akara akara FK816 Double Head Corner nwere ụzọ ngbanwe dị mfe, izi ezi akara dị elu na ịdị mma dị mma, dabere na ihe achọrọ nke izizi dị elu, ngwaahịa mmepụta dị elu, yana ọ siri ike iji anya gba ọtọ hụ njehie ahụ.
① Akara akara: akara mmado, ihe nkiri, koodu nlekọta eletrọnịkị, koodu mmanya.
② Ngwaahịa ndị ọdabara: Ngwaahịa achọrọ ka edobe ya na larịị, ụdị arc, okirikiri, concave, convex ma ọ bụ elu ndị ọzọ.
③ Ụlọ ọrụ ngwa: A na-ejikarị eme ihe ịchọ mma, nri, ihe egwuregwu ụmụaka, chemical, ngwá electronic, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
④ Ngwa atụ: ncha ntutu ewepụghị karama labeling, nkwakọ igbe akara, karama okpu, plastic shei labeling, wdg.
Ịkpọ aha ndidi ± 0.5mm
Ike (pcs/min) 40-100
Nha ngwaahịa suut (mm) L: 20 ~ 300 W: 20 ~ 250 H: 10 ~ 100; Enwere ike ịhazi ya
Nha akara suit (mm) L:15-200;W(H):15-130
Nha igwe (L*W*H) ≈1450*1250*1330(mm)
Nha ngwugwu(L*W*H) ≈1500*1300*1380(mm)
Akwụkwọ mpịakọta ID:Ø76mm;OD: ≤260mm
Usoro nche okporo ụzọ
A na-eji eduzi ntụziaka ngwaahịa
Ọrụ na ntọala paramita
Debe nhazi eletrọnịkị
Ndozi ogologo ogologo
a na-eji mee ka ọnọdụ elu na ala nke isi akara ma dozie ọnọdụ ntinye aha;
Moto traction na-anya ya iji see akara
Edoziri ngwaahịa ahụ ka ọ mee ka ngwaahịa ahụ dabere na eriri ebuga iji hụ na akara aha ziri ezi
Usoro imegharị ihe
recycling labelụ ala akwụkwọ.
Kpochapụ akara ahụ
Ikuku mpịakọta labelụ
Igwe ihe mmetụta
wụnye ihe mmetụta lekwasịrị anya, megharịa ihe mmetụta ahụ azụ na azụ.
Ndozi ogologo ogologo nke usoro nchicha
mezie ọnọdụ elu na ala nke usoro ntinye ihe.
A na-akụkwa akụkụ nke labelụ agbakwunyere na workpiece.
Usoro nhazi ọnọdụ
eji edozi ọnọdụ nke ngwaahịa ahụ ma mee ka akara ahụ guzosie ike.
Master mgba ọkụ
Ìhè ihe ngosi
na-ezo aka ma agbanyere igwe ịde aha.
1. Pịa kpakpando na ihuenyo mmetụ.
2. Ngwaahịa etinyere n'akụkụ ebe nchekwa ahụ, mgbe ahụ, eriri ebufe na-ebugharị ngwaahịa ndị ahụ n'ihu.
3. Mgbe ihe mmetụta ahụ chọpụtara na ngwaahịa ahụ erutela ebe a na-achọsi ike, igwe ahụ ga-ezipụ akara ahụ na roller na-ejikọta ọkara nke akara na ngwaahịa ahụ.
4. Mgbe ahụ, mgbe a na-akpọ ngwaahịa ahụ ma rute ebe ụfọdụ, brush ga-apụta ma gbanye ndị ọzọ ọkara nke akara ahụ na ngwaahịa ahụ, nweta akara nkuku.
4. Oghere dị n'ime nke isi bụ 76mm, na dayameta mpụta bụ ihe na-erughị 300mm, na-ahazi n'otu ahịrị.
1) Sistemụ njikwa: sistemụ njikwa Panasonic Japanese, nwere nkwụsi ike dị elu yana oke ọdịda ọdịda.
2) Sistemụ arụmọrụ: ihuenyo mmetụ agba, ngwa ngwa visual interface dị mfe.Chinese na Bekee dị.Ọ dị mfe iji dozie paramita eletriki niile ma nwee ọrụ ịgụta ọnụ, nke na-enyere aka maka njikwa mmepụta.
3) Sistemụ Nchọpụta: Iji German LEUZE/Italian Datalogic label sensọ na Japanese Panasonic ngwaahịa sensọ, nke na-enwe mmetụta maka labelụ na ngwaahịa, si otú ahụ hụ na elu izi ezi na kwụsie ike labeling arụmọrụ.Na-azọpụta ọrụ nke ukwuu.
Nke gara aga: Igwe eji akara akara FK815 akpaaka akụkụ akụkụ akụkụ
Osote: FK909 Semi akpaaka igwe ndo aha nwere akụkụ abụọ
Igwe eji akara akpaaka maka akụkụ igbe
Igwe njiri akara nkuku igbe
Igwe a na-akpọ Katọn Nkuku
Igwe akara nkuku na ntinye aha
Igwe ndo aha nkuku ugboro abụọ
igwe akara akara n'akụkụ abụọ
Igwe nkpọ aha nkuku nke ọma
Igwe njiri akara nkuku ntuziaka
Igwe eji akara PET akara
Igwe eji akara akara PVC akara
Igwe eji akara ngosi ihe nkiri akara
igwe ihe mkpuchi ihe nkiri
akara akara n'akụkụ abụọ igwe akara akara
Akara akara akara FK815 akpaaka akụkụ akụkụ akụkụ...
FK836 Akpaaka Production Line Akụkụ Labeling M...
FK-FX-30 Igwe na-ekpuchi katọn akpaka akpaaka